2019 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Mr. Win Hlaing at 10:38:00 AM 0
Mr. Win Hlaing at 12:04:00 PM 0
Android Application Messenger Phone Application
Mr. Win Hlaing at 8:54:00 PM 0
facebook သုံးတဲ့ဘော်ဒါတို့အတွက် facebook messenger လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကိုတော့အားလုံးသူသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ facebook နှစ်ကောက်ရှိသူများအတွက်ကတော့ ပိုပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ facebook apk တစ်ခုသုံး facebook messenger မှာတစ်ခုသုံးပေ့ါ ။ နောက်ပြီး ဒီမှာတော့ ဟိုတုန်းက version ထက် ချစ်စရာ အရုပ်ကလေးများပါလာတာကိုတွေရပါတယ်။ updated သုံးချင်းတဲ့ဘော်ဒါတို့အတွက် အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
Computer software Fonts PC Fonts PC Software
Download All-in-One Installer : ( Link 1 or Link2)
Download All-in-One Zip : ( Link 1 or Link2)
Download User Manual ( Link 1 or Link2)
Font File ရယူရန်
Font တစ်မျိုးတည်း သီးသန့်ရယူနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
(Windows, Office Version မသိပါက Font Only Installer ကိုယူပါ)
Download Font Only Installer ( Link 1 or Link2)
Windows 10, 8 တွင် MS Office 2013 နှင့်အထက်တင်ထားပါက
Download Pyidaungsu Regular 2.5.3 ( Link 1 or Link2)
Download Pyidaungsu Bold 2.5.3 ( Link 1 or Link2)
Download Pyidaungsu Numbers 2.5.3 ( Link 1 or Link2)
Download Myanmar3 2018 ( Link 1 or Link2)
Windows 7, XP သို့မဟုတ် MS Office 2010 နှင့်အောက်တင်ထားပါက
Download Pyidaungsu Regular 1.8.3 ( Link 1 or Link2)
Download Pyidaungsu Bold 1.8.3 ( Link 1 or Link2)
Download Pyidaungsu Numbers 1.8.3 ( Link 1 or Link2)
Adobe Photoshop, Indesign CS3 အတွက်
Download Pyidaungsu Book Regular 1.8 ( Link 1 or Link2)
Download Pyidaungsu Book Bold 1.8 ( Link 1 or Link2)
iPhone, iPad အတွက် (Safari Browser ကိုအသုံးပြု၍ရယူပါ)
Noto Sans ZawDecode font (စမ်းသပ်အဆင့်)
Download Noto Sans ZawDecode ( Link 1 or Link2)
PyidaungsuMM Layout (လက်ကွက်ပုံ)
Download Keyman-PyidaungsuMM-2.1.exe ( Link 1 or Link2)
IE9နှင့်အထက် ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်
Download KeyMagic-v2.0.0.6.exe ( Link 1 or Link2)
Download KeyMagic for MacOS ( Link 1 or Link2)
Download Keyman for MacOS ( Link 1 or Link2)
Download PyidaungsuMM-2.1.kmp ( Link 1 or Link2)
Keyman တွင်လက်ကွက် မရှိသေးပါက ထည့်သွင်းရန်
Download Pyidaungsu MM.km2 ( Link 1 or Link2)
KeyMagic တွင်လက်ကွက် မရှိသေးပါက ထည့်သွင်းရန်
Source : Unicode.today
Converter Tutorial Tutorial Videos နည္းလမ္းမ်ား
ဟုတ်ကဲ့.. ဒီ ဗွီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ Zawgyi နဲ့ရေးထားတဲ့ ဖိုင်တွေအများကြီးကို တစ်ချက်တည်းနဲ့ Unicode ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာ သိသွားမှာပါ.. Word(.docx), Excel(.xlsx), Powerpoint(.pptx), .txt, .srt, .csv, .sql ဖိုင်အမျိုးအစားတွေဆိုရင်ပေါ့..
Zawgyi နဲ့ရေးထားတဲ့ ဖိုင်တွေအများကြီးကို တစ်ချက်တည်းနဲ့ Unicode ပြောင်းတဲ့နည်းပါ..
ဒီ Software လေးက Word(.docx), Excel(.xlsx), Powerpoint(.pptx), .txt, .srt, .csv, .sql ဖိုင်အမျိုးအစားတွေရဲ့ Zawgyi Font တွေကို Unicode (Pyidaungsu) Font အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်..
တစ်ဖိုင်ချင်းလည်းပြောင်းလို့ရသလို Folder တစ်ခုလုံးထဲက ဖိုင်တွေအားလုံးကိုလည်း ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်..
Download : Z2U.exe (8.7MB)
Mr. Win Hlaing at 5:17:00 PM 0
Realme Phone ေၾတကို Unicode ေ်ပာင္းနၫ္းေမးထားတဲ့သူမ္ားအၾတက္ တင္ေပးလိုကၸါတယ္ ခငၺ္ာလုပၷၫ္းေကတာ့အရမ္းၾလယၠဴပါတယၺ္ ။Oppo အ်မင့္ Phone ေၾတမြာ လၫ္း ဤ နၫ္းလမ္းအတိုင္း ေ်ပာင္းႏိုငၸါသၫ္ ။Unicode ေ်ပာင္းရငၼိမိဖုႏ္းမြာေတာ့ System ေကတာ့ ်မႏၼာလို ်ဖျစ္သားပါမၫ္ ။ပီးရင္ အရငၼိမိ Zawgyi ေရးမြတၳားတဲ့ Contact, Music, Video, Note.. ေၾတမြာ ်မႏၼာစာမြႏ္ေတာ့မၫ္ မဟုတၸါ ။ ဒါကိုၾကၽႏ္ေတာၱိဳ႕က မြႏ္ေအာင္ေ်ပာင္းမယ္ ။ Zawgyi ေကန Unicode ေ်ပာင္းရႏ္အၾတက္ App တစၡဳေတာ့သုံးရပါသၫ္ ။ Application နာမၫ္ ေကတာ့ mmunicode Toolkit ပါ ။ Keyboard ေကတာ့ ၾကၽႏ္ေတာ္ က Bagan Keyboard User ်ဖစ္ တဲ့အၾတက္ Bagan ပဲ သုံးပါတယ္ ။
Download Bagan - Myanmar Keyboard
Mr. Win Hlaing at 5:11:00 PM 0
တရားတော်များ နာယူလိုသူ ဒေါင်းယူလိုသူ ၊ပရိတ်တော်သုတ်တော်ဂါထာတော်များအား စာနဲ့ အသံဖိုင်ပါတွဲ၍ ရွတ်ဖတ်လိုသူ၊ဝိပ္ပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော်များ၊ဂါထာတော်များစုံလင်စွာပါရှိသည့် ဓမ္မရတနာ app(ဆော့ဝဲလေး)တင်ပေးပါရစေခင်ဗျာ။ယခုဆော့ဝဲလေးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လောကီလောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာအကျိုးရရှိနိုင်ကြပါစေ။
Fonts Mobile Fonts
Huawei နှင့် Honor Phone အားလုံးကို Unicode ပြောင်းနည်း
Mr. Win Hlaing at 5:03:00 PM 0
Huawei နှင့် Honor Phone အားလုံးကို Unicode ပြောင်းဖို့အတွက် Application လေး တင်ပေးထားပါတယ်.. ပုံလေးကိုကြည့်ပြီး Install လုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်..
Application ရေးသားတဲ့ Developer ကိုလည်း လေးစားစွာ Credit ပေးပါတယ်..
Facebook Tutorials Tutorial Tutorial Videos
Maung Pauk at 9:16:00 PM 0
Facebook ရဲ့ အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်စနစ်မှာ မြန်မာဘာသာကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်.. အဲဒီစနစ်ကိုမရသူတွေအတွက် နည်းလမ်းလေး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်..
ကိုယ့် Facebook App ဟာ Up to date ဖြစ်နေရပါမယ်.. Up to date သို့မဟုတ် Auto Translate ကိုအထောက်အပံ့ရတဲ့ Version ဖြစ်နေရပါမယ်.. မရသေးရင် Update လုပ်လိုက်ပါအုံး..
ပြီးရင် ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Facebook ကိုဖွင့်ပါ.. ညာဘက်အပေါ်က မျဉ်း ၃ ကြောင်းကိုနှိပ်ပါ..
၂. Settings & Privacy ကိုနှိပ်ပါ..
၃။ Settings ကိုထပ်နှိပ်ပါ..
၄. Translation for Posts ကိုနှိပ်ပါ..
၅. အပေါ်ဆုံးက Language you'd like to have posts translated into ကိုနှိပ်ပြီး Burmese(ြမန်မာဘာသာ) ကိုရွေး.. ပြီးရင် Save လုပ်ပါ..
၆. ဒုတိယတန်းကိုလည်းထပ်နှိပ်ပြီး မြန်မာဘာသာကိုရွေးကိုပြီး Save လုပ်ပါ.. တတိယတန်းကိုတော့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး..
၇. English နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုလိုက်ကြည့်ပါ.. အောက်မှာ See Translation ကိုမြင်ရပါမယ်.. အဲဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်ပါ..
၈. ဝါကျတိုလေးတွေဆိုရင် တော်တော်အဆင်ပြေပြေ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါမယ်.. ဝါကျရှည်ရင်တော့ အဆင်မပြေဘူး..
Computer နဲ့ Facebook သုံးနေသူတွေအတွက်..
၁. ညာဘက်အပေါ်နားက တြိဂံဇောက်ထိုးလေးကိုနှိပ်ပြီး Setting ကိုနှိပ်ပါ..
၂. ဘယ်ဘက်က Language and Region ကိုနှိပ်ပါ.. ညာဘက်မှာ Language you'd like to have posts transolated into ကို Edit ကိုနှိပ်ပါ..
၃. မြန်မာဘာသာ ကိုရွေးပြီး Save Change ကိုနှိပ်ပါ..
၄. Languages you don't want to be offered translations for ကိုလည်း Edit ကိုနှိပ်ပြီး Burmese(မြန်မာဘာသာ) ကိုနှိပ်ပါ..
၅. ပြီးရင် English နဲ့ရေးထားတဲ့ ပို့စ်တွေကိုသွားကြည့်ပါ.. အောက်မှာ ဘာသာပြန်ဆိုချက်အားကြည့်ပါ ဆိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်.. အဲဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
၆. မြန်မာဘာသာနဲ့ပြန်ထားတာကို မြင်ရပါမယ်.. ဝါကျတိုတွေကိုတော့ တော်တော်အဆင်ပြေအောင် ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်.. English သာမက အခြားဘာသာတွေကိုလည်း ပြန်နိုင်ပါတယ်..
Tutorial Tutorial Videos နည္းလမ္းမ်ား
Gboard မှာ အသံနဲ့စာရေးတဲ့စနစ် Voice Typing ရအောင်လုပ်နည်းတစ်နည်း
Maung Pauk at 3:35:00 PM 0
Google App တွေမပါတဲ့ Chinal ROM တွေမှာ Google App တွေကိုသီးခြားထည့်ထားရတော့ လိုအပ်တဲ့ Frame တွေမပြည့်စုံလို့လား၊ အခြားအကြောင်းတွေကြောင့်တွေလား..
ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Gboard မှာ Voice Typing မရရင် ဒီနည်းလေးက အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ..
Gboard Download :
English to Myanmar(Burmese) Dictionary and Translator APK
Mr. Win Hlaing at 1:53:00 PM 0
သင့္ရဲ့ အဂၤလိပ္စာ4skills တိုးတက္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ English to Myanmar(Burmese) Dictionary and Translator APK အသံုးျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ဒီေကာင္းကေတာ့ စကားလံုးေပါင္း ၅ သိန္းေက်ာ္ပါဝင္ျခင္း၊ အဘိဓာန္ အျဖစ္ သံုးနုိင္ျခင္း၊ ျမန္မာစာမွ အဂၤလိပ္စာသုိ႔, အဂၤလိပ္စာမွ ျမန္မာစာသို႔ မွန္ကန္စြာ ဘာသာျပန္ေပးႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝ္လ္ ျဖစ္ပါတယ္။အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသင့္တဲ့ ေဆာ့ဝ္လ္ ျဖစ္ပါတယ္။
Mr. Win Hlaing at 12:37:00 AM 0
ဖုန်းနံပါတ်မှာ ဇော်ဂျီနှင့်မှတ်ထားသောမြန်မာနမ်မည်တွေကို Unicode စာဖြစ်အောင် UniContact ဗားရှင်းအသစ်ကနေ ပြောင်းလဲနည်း။
Maung Pauk at 10:20:00 PM 0
Xiaomi ဖုန်းများအတွက် Myanmar Unicode Install လုပ်နည်း၊ Keyboard ထည့်သွင်းနည်းနှင့် Message မှာ Unicode ရော Zawgyi ပါ အမှန်မြင်ရအောင်လုပ်နည်း Tutorial အပြည့်အစုံဖြစ်ပါတယ်...
Unicode အတွက် လိုအပ်သော Android Application များကို အောက်ကလင့်မှာ Download လုပ်ပါ...
Download : http://bit.ly/unicodeapps
Android Application Fonts Mobile Fonts Phone Application Unicode
Maung Pauk at 6:39:00 PM 0
စမတ်ဖုန်းတွေ Unicode အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင်
ပထမဆုံး Font ကို မှန်ကန်အောင် Install လုပ်ရပါမယ်
ဒုတိယက အဆင်ပြေတဲ့ Keyboard တစ်ခုခုကို Install လုပ်ရပါမယ်..
တတိယက ကိုယ့်ဆီကို Message ဝင်လာတဲ့အခါ Zawgyi နဲ့လည်း ဝင်လာမယ်၊ Unicode နဲ့လည်းဝင်လာမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Zawgyi ရော၊ Unicode ပါ ဖတ်လို့ရမယ့် Message Application တော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်..
ဒီတော့ အောက်မှာ လိုအပ်တဲ့အဆင့်အလိုက် အသုံးပြုရမယ့် Application တွေကို စုစည်းဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. သက်ဆိုင်ရာ Application ပိုင်ရှင်တွေ၊ Developer တွေကိုလေးစားစွာ Credit ပေးပါတယ်..
Root ဖောက်ဖို့မလိုဘဲ Android ဖုန်းတွေထဲမှာထည့်လို့ရမယ့် Unicode Font Installer တွေဖြစ်ပါတယ်.. ဖုန်းအားလုံးနဲ့မကိုက်ပေမယ့် တော်တော်များများတော့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်...
Download mmUnicode Toolikt (Unicode Converter and Font Install via zFont)
TTA Unicode Installer
Oppo, Vivo Unicode Installer
Unicode အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Android အတွက် မြန်မာ ကီးဘုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်.. Android ဖုန်းအားလုံးနီးပါးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်−
1.Bagan Keyboard (Trial Version) 12.2
4. TTKeyboard v20190910
5. Manic Myanmar Keyboard v0.9.2
Unicode ရော Zawgyi ပါ အမှန်မြင်ရမယ့် Message Application ဖြစ်ပါတယ်.. ဖုန်းမှာပါတဲ့ Message Apps နေရာမှာ အစားထိုးသုံးစွဲရပါမယ်.. Connect MUX လို့ခေါ်ပါတယ်.. ဒီ MUX ကိုဖွင့်ပြီး ညာဘက်အပေါ်ထောင့်က အစက် ၃ စက်ကိုနှိပ်ကာ Unicode နဲ့ Zawgyi ကြားအပြန်အလှန်လည်း Convert လုပ်နိုင်သလို Contact တွေနဲ့ File တွေကိုလည်း Zawgyi ကနေ Unicode ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်..
Download Connect MUX v1.1.4
Mr. Win Hlaing at 11:51:00 PM 0
ဒီနေ့ကစပြီး ယူနီကုဒ်ကို စတင်ပြောင်းလဲသုံးစွဲကြတော့မှာပါ။
ဆိုတော့ . . . သင်တို့ရော ပြောင်းလဲဖို့ Ready ဖြစ်ကြပြီလား 😁😁 မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်လဲ 😎 ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ကိုယ်မို့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် မပြောင်းလဲရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ 😟 အခက်အခဲတစ်ချို့ကတော့ ဖုန်းအော်ပရေတာတွေက ပို့တဲ့စာတွေဖတ်လို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး 😢 တစ်ချို့ Friend တွေကပို့တဲ့ ယူနီကုဒ်စာတွေကိုလဲ ဖတ်လို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး 😭 လောလောဆယ် မင်မင်ကိုယ်တိုင်ပင် ဖတ်မရဖြစ်နေပါကြောင်း 😜😜 လက်တလောမှာတော့ Facebook နဲ့ Messenger တို့မှာ Auto Translate 😘😘 လုပ်ပေးနေလို့ အဆင်ပြေနေပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်မှာ Facebook ကပါ Zawgyi ကို
ဖျက်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုပါက 🥶 မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲတွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ 🥺
(မှတ်ချက်။ 🤫 ဇော်ဂျီဖြင့်ပို့သည်များကို ယူနီကုဒ်ဖြင့် facebook/messenger တွင်
နောင်ခါမခက်အောင် 🧐 အခုတစ်ခါထဲပြောင်းချင်ရင်ဖြင့် 🤔
ဖုန်း Name အလိုက် 👆 ပုံကိုနှိပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်
unicode fonts ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်
နောက်ထပ်လိုအပ်တာက keyboard ပြောင်းဖို့ပါပဲ
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ keyboard ထဲက
zawgyi ရွေးထားတာကိုဖြုတ်ပြီး unicode ကို
အရင် keyboard ကိုuninstall လုပ်ပြီး
အောက်က အဆင်ပြေတဲ့ တစ်ခုခုကို
ဒေါင်းပြီး install လုပ်လိုက်ပါ။ 👇
သို့မဟုတ် ဒေါင်းပြီး install လုပ်လိုက်ပါ။ 👇
zawgyi ဖြင့်ပို့ထားသော message များကို
app ကိုဒေါင်းပြီး install လုပ်ပါ။ 👇
zawgyi နဲ့မှတ်ထားတဲ့ ဖုန်းcontact
တွေကို unicode ပြောင်းဖို့ အောက်က
ဖုန်းထဲက zawgyi နဲ့ရေးတဲ့စာတွေကို
unicode ပြောင်းဖို့ အောက်က app လေး
ဒေါင်းပြီး install လုပ်ပါ။ 👇
ဒီမှာ ၀င်မေးလို့ရပါတယ် 👇
I Phone အတွက်လက်ရှိ setting>>general>>profile>>zawgyi profile install ထားတာကို အရင်ဆုံး ဖျက်ရပါမယ်။ပြီးရင် MyFont application ကို နောက်ဆုံး version ကို update လုပ်ပေးပါ။ Update လုပ်ပြီးရင် application ထဲဝင်ပြီး essential tab ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ဆုံးမှာ Hybrid font (Zawdecode 1.1) ကို install လုပ်ပေးပါ။ Setting>>General>>Profile မှာ install ဆိုတာ ပြန်နှိပ်ပေးရပါမယ်။Profile မှာ install လုပ်ပြီးပြီဆို font တွေကို ဘာနဲ့ ရေးရေး ဖတ်လို့ရပါပြီ။ မပြီးသေးပါဘူး၊ keyboard ကိစ္စကျန်ပါသေးတယ်ttkeyboard ကိုနောက်ဆုံး version ထိ update ပေးပါ။ Update လုပ်ပြီးရင် application ထဲဝင်>>setting>> keyboards>> zawgyi ကို remove >> ပြီးရင် add new keyboard>> zawcode(unicode) ဆိုတာကို ရွေးပေးပါ။ iphone ကို restart ချပေးပါ။
SAMSUNG ဖုန်းအတွက်Settings > Control > Language > English နဲ့Settings > Device > Font > FontStyle ကို System Font သို့မဟုတ် Default သို့မဟုတ် မြန်မာ (Unicode) သို့မဟုတ် English (US) ထားလိုက်ပါ။
Huawei EMUI 9.1 အတွက်Setting > System > Language and input > Language and Region မှာLanguage ကို English နဲ့ Region ကို Myanmar (Burma)ထားပါ။Huawei EMUI 8 အတွက်System > ဗမာ (Unicode) ပြောင်းလိုက်ရင် System တစ်ခုလုံး မြန်မာလို ပြောင်းသွားမည့်အတွက်EMUI 9.1 ကို မြှင့်မှ အဆင်ပြေမှာပါ။ပြီးနောက် zfont ကို playstore မှ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး pyidaungsu font ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။အဆင်မပြေပါက zfont ကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး ပြန်လည်install လုပ်ပေးပါ။
Vivo Fontouch OS9 မှာ
Setting > Language and input မှာ ဗမာ (Myanmar)ထားပါ။
(English ကိုရွေးရင် ဇော်ဂျီပဲဖြစ်နေအုံးမှာပါ။)
အဲ့ဒါကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး download > iTheme > Local > Font အောက်မှာထားပေးပါ။
Setting > Themes > Font > MiLanting (Default) ရွေးပြီး Apply လုပ်ပါ။
ပြီးရင် Reboot လုပ်ပါ။
Honor ဖုန်းအတွက်Setting > Language and input Language > Add Language > Burmese(Unicode) ဗမာ(မြန်မာယူနီကုဒ်)
Oppo နဲ့ Realme ဖုန်းအတွက်Setting > Langauge and input > Language > ဗမာ (မြန်မာယူနီကုဒ်) သို့မဟုတ်zfont ကို playstore မှ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး pyidaungsu font ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။အဆင်မပြေပါက zfont ကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး ပြန်လည်install လုပ်ပေးပါ။
Nokia ဖုန်းအတွက်Setting > System > Language & Input > English (United Kingdom)ကို Default ထားပေးပါ။
#Myanmar Unicode Area
Crd - King Service Wisdom
မြန်မာစကားပြောပီး နိုင်ငံပေါင်း (၃၁) အထိ အသံဖြင့်စ...